Niala Ny Komisera Misahana Ireo Zon’ny Ankizy Ao Rosia, Nefa Mahatsiaro Azy Izahay Amin’ireto Zavatra Fito Ireto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2016 3:48 GMT
Fialàn'ny Kaomisera Rosiana misahana ny Zon'ny Ankizy, Pavel Astakhov. Ary akondro iray. Sary nataon'i Kevin Rothrock.
Niala ihany nony farany i Pavel Astakhov, kaomisera Rosiana misahana ny zon'ny ankizy ary lehilahy iray manana talenta maro. Manan-danja ny famintinana mikasika ny asan'i Astakhov: nanoratra tantara mikasika ny mpitsongo dia izy, nanomana fandaharana tao amin'ny fahitalavitra, ary nanao asan'ny mpisolovava mpiaro ny voampanga, niarahana tamin'ireo mpanjifa nahitàna ny ben'ny tanànan'i Maosko taloha, Yuri Luzhkov, sy ny vadiny, Yelena Baturina, ny minisitry ny Kolontsaina taloha, Mikhail Shvydkoi, ilay mpitarika orkestra sy mpahay mozika Vladimir Spivakov, ary olo-malaza hafa sy mpiasam-panjakana ampolony .
Ary azo antoka ny hilazàna fa olo-malaza ihany koa i Astakhov, na dia avy amin'ireo tantara ratsy sy sotasota imasom-bahoaka aza ireo lazany amin'ny ankapobeny. Mitanisa ireo fotoana fito tena nisongadina nandritra ny asany ny RuNet Echo, eto am-pisarahantsika amin'ilay kaomiseran'ny zon'ny ankizy tao Rosia nandritry ny fotoana lavabe.
1) Ny Poetan'ny efitra fitsarana
Tany amin'ny taona 2000, nanapa-kevitra ny hamaky mafy ny iray tamin'ireo tononkalony tao amin'ny efitrano fitsarana i Astakhov fony izy mpanorina ny kabinetran'ireo mpisolovava tao Maosko. Talohan'ny fotoanan'ny Facebook sy ireo tambajotra sosialy maoderina hafa izany, saingy ny aterineto rosiana izay teo am-pahaterahana dia nitàna an-tsoratra. Niaro an'i Edmond Pope i Astakhov, ilay Amerikana fantatra ho tompon'antoka tamin'ny fivarotana antsokosoko fitaovam-piadian'ny tafika tany ivelan'i Rosia, ary navotsotr'i Vladimir Poutine taty aoriana. Afaka mamaky ny sasantsasany mikasika ny voatanisan'i Astakhov tao amin'ny fitsarana ianareo, sady somary ratsiratsy ilay izy.
Tsy mbola manam-panahy ny fehezan-dalàna,
Saingy ianao manam-panahy, fantatro izany.
Manana fo midanadana ny Rosiana, ary finoana tsy mihatsaravelatsihy,
Ary vonona hiatrika ny Mpamorona,
Ary vonona hamela heloka tsy indray mandeha, tsy indroa koa aza.
Ka angamba ampy izany miaraka amin'ny
Voaheloka tsy ara-drariny, nohomboina?
Astakhov ihany no mamaritra ilay tononkalo ho toy ny “fitarainan'ny fanahiny”, tamin'ny fanambarana fa na io aingam-panahy nentin'ny fotoanan'ny fahazavàna, na io avy tamin'ny fikorontanana (kanefa tsy azony antoka hoe iza amin'ireo.)
2) Ny Mpitsara ny fahitalavitra
Nandritra ny valo taona, nanomboka ny taona 2004 ka hatramin'ny taona 2012, niseho isanandro teo amin'ny fahitalavitra i Astakhov amin'ny maha mpitsara azy ho an'ny seho voalohany mikasika ny fitsarana teo amin'ny firenena, “Fotoam-pitsarana” (Час суда). Ratsy omana ny seho, nefa matotra be i Astakhov nanao ny andraikiny, nitrerona ireo mpandray anjara tamin'ny fandaharana noho ny fitondrantena tsy mendrika, ohatra tamin'ny fitenenana azy ireo hanary ny siligaomany sy hanala ireo solomasony fiarovana amin'ny masoandro. Nidera an'i Astakhov sy ny angolangolany eo ampiasàna ireo mpankafy azy, saingy ireo mpampiasa aterineto mafy fo, nisafidy ny hanesoeso azy, ary ny fandaharana ho toy ny fialamboly mora vidy.
3) Andro maoderina Mercutio iray
Ny taona 2005, niaro an'i Khabib Patakhonov i Astakhov, mpifindra-monina iray tsy ara-dalàna avy any Uzbekistan, 19 taona, izay nanimba an'i Valya Isayeva, ankizivavikely 11 taona avy ao amin'ny faritra mahantra iray ao Maosko. Nohon'ny fanampian'i Astakhov, afaka ny fonja i Patakhonov ary nahazo sazy mihantona fotsiny. Nandoko an'i Astakhov ho sahala amin'ny mpamonjy an'i Romeo sy Juliette maoderina ireo media rosiana, tamin'ny fanamafisana tao anatin’ireo tatitra nataony fa nihantsy an'i Patakhonov, mpifanolobodirindrina taminy ilay zazavavikely, teo ampisotroana zava-mahamamo, talohan'ny ‘nambaboany’ azy. Taorian'ny fitsarana, nahazo ny zom-pirenena Rosiana i Patakhonov ary nanambady an'i Isayeva raha vao feno efatra ambiny folo taona monja izy. Niharan'ny kiana mivaivay i Astakhov amin'ny maha-mpiaro ny vehivavy sy amin'ny maha-tia-tanindrazana Rosiana azy, saingy tsy nanakana azy tsy ho voatendry ho kaomiseran'ny zon'ny ankizy Rosiana akory izany, efatra taona taty aoriana.
4) Mpanohana Feno ny Tsy Fahafahan'ny Amerikàna Manangan-jaza
Ny taona 2013, nanohana ilay “lalàna Dima Yakovlev” mahamenatra i Astakhov, izay nandrara ireo olom-pirenena Amerikana tsy hahazo manangana zaza Rosiana. Rehefa nanontaniana izy mikasika ny heviny momba ilay lalàna, nentin'i Astakhov nihataka lavitra ilay lalàna ny resaka, tamin'ny filazàny fa toheriny ireo rehetra fananganana zaza ataon'ny vahiny, fa tsapany ho ireo ray aman-dreny Amerikana mpanangana no tena ratsy indrindra.
5) Tsy Fandraisana Andraikitra Manoloana ny Fanambadiana Anterisetra
Tamin'ny taona 2015, tsy niraharaha ny fidirana an-tsehatra tamin'ny zavatra mamoafady tao Chechnya i Astakhov, izay nampanambadiana an'i Louise Goylabiyeva 17 taona tamin'i Nazhud Guchigov, ilay kapiteny iray ao amin'ny polisy, 50 taona ary efa nanambady (sady toa ohatran'ny namana akaikin'ny mpitondra an'i Chechen, Ramzan Kadyrov). Ny ankamaroan'ireo media tsy miankina rehetra dia nitatitra avokoa fa natao anterisetra ny fanambadiana tamin'i Goylabiyeva, saingy i Astakhov, kaomiseran'ny zon'ireo ankizy dia nanazava fa tsy nahaliana azy ilay trangan-javatra. Ho fanapoforoana ny tsy fandraisany andraikitra, nanazava tsy ampieritreretana tamin'ny vahoaka izy fa “ireo fanambadiana aloha loatra” dia tena ilaina any amin'ireo faritra sasantsasany ao Rosia, satria ireo vehivavy eo an-toerana “dia efa manomboka malazo eo amin'ny faha-27 taonany, ary jerena toy ny manodidina ny 50 taona aty amintsika [aty Maosko].” Nanaiky i Astakhov taty aoriana fa tsy tsara ny fomba fanehoany hevitra, saingy taorian'izay teo amin'ny Twitter mbola niresaka ny 27 taona ho toy ny “taona mampalazo” ireo vehivavy hatrany izy.
6) Ny Twitter adala
Vao volana vitsivitsy taorian'ny nahavitan'ny fanambadian'i Goylabiyeva nahabe resaka, nanontany ireo mpanaraka ny Twitter-ny i Astakhov mikasika ny fomba fahitan'izy ireo ny famatorana ny ankizy mpianatra amin'ny dabilion'izy ireo ho toy ny fitaovana fanabeazana azo ekena. Nilaza ho tsy manohana ilay fomba fanao i Astakhov taty aoriana, saingy ny fanadihadian'ny Twitter no nisarika be ny saina tety amin'ny tambajotra, ary maro no nandika izany ho tahaka ny fanekena ilay fomba fampianarana tsy nifanarahana, manaraka ilay fotopisainana hoe ‘manaiky matoa tsy miteny’.
7) Ilay Mpamaky Vay Ratsy indrindra Nisy Hatrizay
Vao haingana tamin'ity lohataona ity, tamin'ny 2016, tafiditra tanaty tranga iray mamoa-fady tsy nahafahany niala i Astakhov nony farany. Fivoriana nahitana ireo sisa velona tamin'ny faharendrehana sambo tao Karelia izay nahafatesana zaza 14, nosokafan”i Astakhov tamin'ny fanontaniana iray mahamenatra ankehitriny, “Ka nanao ahoana ny filomanosana?” Nampitselatra ny fon'ny maro ilay tsikera tsy misy antony manompa, nanosika ho amin'ny fanangonan-tsonia tao amin'ny Change.org miantso ny fialàn'i Astakhov, izay nahazoana sonia maherin'ny 155.000. Ni niafaràny, nanaiky i Astakhov ankehitriny fa hiala. Ny 1 Jolay, nohamafisiny ireo honohono izay manambara azy ho nametraka taratasy fialàna tany amin'ny Filoha Putin. Ny 4 Jolay, nanamafy ny Kremlin fa niala tokoa i Astakhov.